Abantu abaningi bayazibuza: 'Kungcono ukuba ku ekhishini evulekile yakho emashalofini noma udonga iKhabhinethi? " Vula emashalofini esingcono phezu amakhabethe - musa hlala isikhala kakhulu ekhishini. Kodwa musa ngokushesha ukugijimela esitolo ifenisha futhi ayithenge emashalofini.
Ikhishi odongeni amakhabethe lwakhiwe ikakhulukazi ukugcina ahlukahlukene Cutlery, izinongo, seasonings nokudla. Lokhu ifenisha has a umnyango lapho konke igcinwa khona, akusiyo ebonakalayo. Futhi odongeni amakhabethe kungase kudingeke linezingxenye esikhethekile ekhishini Imishini. Lokhu kuyasiza kakhulu nxa ukuhlunga izinto, ayibi yini njengento engelutho kuyalahleka konke kuyoba endaweni.
Ngokuvamile iKhabhinethi ensikeni unamathele odongeni ekhishini ngenhla nje sokusebenza. Ngenxa avaliwe uhlobo umnyango ivikela imikhiqizo kanye ekhishini izitsha ezivela emiphumeleni elimazayo kwelanga, uthuli nezinye izinto ezingezinhle, angeke kushiwo mayelana emashalofini evulekile.
Futhi emashalofini evulekile ngeke akubekezelele sifo. Lokhu akusiyo indawo izimbiza, amapuleti nezinye Cutlery. Ingabe indawo kubo ukuze amehlo umxhwele. Futhi kuba kude akubona bonke, ngoba ukubeka Cutlery babe izikhathi eziningana ngosuku. Ngakho-ke, emashalofini evulekile kuphela asetshenziselwa ukugcina izinkomishi Antique, nezinkezo esiliva kanye nezinye imihlobiso, ezisetshenziswa kanye ngenyanga (noma ngaphansi).
Enye evulekile lokususa esinanyathiselwe emashalofini ukuthi zidinga ngohlelo hhayi kuphela, kodwa futhi nokuhlanzeka esiqinile.
Ikhishi odongeni amakhabethe ukusiza ukufihla Cutlery emikhulu kanye nemikhiqizo. Le mininingwane kubalulekile kakhulu emakhishini ezincane, edinga ukusebenza esiphezulu kanye usizo. Ishadi Lezingubo Engingazigqoka kwesihenqo kusiza ukusebenzisa sokusebenza ngempumelelo enkulu nokusebenza.
Okwamanje, kunezinhlobo eziningana ifenisha ukukhwezwa:
nge umnyango "Coupe" uhlobo.
Namuhla, bayanda ngokuvamile ungabona ifenisha ekhishini, ehlotshiswe zonke izinhlobo metal, lokhuni noma ingilazi ifaka.
ifenisha izitolo eziningi, kukhona eyodwa ngaphezulu inguqulo ye emashalofini ekhishini, okuthiwa ekhishini isiqhingi. ukwakhiwa salo itafula, kuhlangene iKhabhinethi. Lesi siqhingi ekhishini luphakeme zonke ezinye imiklamo e ukusebenza yayo, kodwa kuphela ezifanelekela emakhishini ezinkulu futhi ivulekile. Ngakho, lapho ukhetha ifenisha kwesihenqo noma ekhishini esiqhingini kufanele uyinaka isitayela jikelele kanye nobukhulu emagcekeni ekhishini.
Okunye okubalulekile kule kanye impahla zazo zenziwa ekhishini-wall units. Zikhona ongakhetha izinkuni plastic, metal, yokufakelwa kanye zemvelo.
ukhuni Yemvelo - eqolo futhi imvelo ifenisha impahla. Ngokuvamile wenza-ke "Coupe" uhlobo ifenisha kanye ekhishini odongeni amakhabethe. ukhuni Zesayensi Ezingesilo iqiniso, okuyinto esetshenziswa enkulu ekwakhekeni ekhishini ifenisha, has a izindleko kuqhathaniswa eliphezulu. Nokho, noma yimuphi ifenisha ezenziwe ngokhuni yemvelo ezithembeke kakhulu, esebenzisekayo futhi iqine.